ईमानदारीको मार्ग हो।
विवेकपूर्ण, आत्म-चलिरहेको, निःशुल्क हुनेछ; शक्तिको स्रोत, तर आफैलाई शक्ति छैन। सबै अनगिनत उमेरले ठूलो बलिदान हुनेछ।
Vol।2मार्च, 1906। नम्बर 6
हुनेछ (पिस्स) राशि को 12 औं संकेत हो।
प्रजातान्त्रिक अस्तित्वमा अभिव्यक्तिमा क्रमबद्धता को क्रम यो हो: गति (वृषभ) को आध्यात्मिक विषय को रूप मा ड्यूटी व्यक्त गर्न को लागि समृद्ध पदार्थ (gemini) को कारण हो; आध्यात्मिक कुरामा ठूलो सांस (क्यान्सर) मा काम गर्दछ जुन जीवनको सागर (लेओ) मा सास गर्दछ; जीवनको सागरले बनाउँछ र फारम (क्योगो) मा समेट्छ; र फारम (लिग्रा) मा विकसित हुन्छ। सेक्सको विकासको साथ आत्माको प्रलोभन पूरा भयो। जब यौन विकास गरिन्छ, दिमाग (क्यान्सर) अवतार गर्दछ। विकासको क्रम यो छ: यौन सम्बन्ध सम्बन्धी विषय (लिब्रा) को इच्छा (वृश्चिक) को रूप मा (क्योगो) को माध्यम ले विकसित गर्दछ; इच्छा (विचार) मा जीवन (लेओ) को माध्यम ले विचार मा विकसित गर्दछ; सोचामा व्यक्तित्व (मकवान) मा सास (क्यान्सर) मा विकास हुन्छ। व्यक्तिगतता आत्मा (एक्यूरीस) मा पदार्थ (gemini) मार्फत मा विकसित; आत्मा गति (वृषभ) मार्फत इच्छा (पिठ) मा विकास गर्दछ। कुकुर हुनेछ (आर्य)।
रङहीन हुनेछ। सार्वभौम हुनेछ। विनाशकारी, अनबाउन्ड हुनेछ। यो सबै शक्तिको स्रोत र उत्पत्ति हो। सबै जान्दछन्, सबै बुद्धिमानी, बुद्धिमानी, कहिलेकाहीँ।
यो प्रयोग गर्नका लागी सबै प्राणीहरुलाई सामर्थ्य बनाउनेछ, तर शक्ति हुनेछैन।
सबै बांड, सम्बन्धहरू, सीमाहरू, वा उत्साहबाट मुक्त हुनेछ। निःशुल्क छ।
विवेकपूर्ण, अप्रत्याशित, असीमित, आत्म-हिड्ने, मौन, एक्लै हुनेछ। सबै विमानहरूमा उपस्थित हुनेछ, र प्रत्येक इकाई अनुसार यसको शक्ति र शक्ति प्रयोग गर्ने क्षमताको अनुपातमा। यद्यपि उनीहरूको निष्ठा गुणहरू, गुणहरू, इच्छाहरू, विचारहरू, ज्ञान र ज्ञानअनुसार काम गर्ने शक्तिलाई दिइनेछ, अझैसम्म कुनै पनि क्रियाकलापको चरित्रद्वारा स्वतन्त्र रहनेछैन र अनियमित हुनेछ।
बिना केहि पनि सम्भव छैन। आफैलाई कुनै पनि र हरेक अपरेशनमा दिइनेछ। विलम्ब सीमित, संलग्न, वा रुचि छैन, कुनै पनि उद्देश्य, कारण, अपरेशन, वा प्रभाव। सबै भन्दा चौंका र रहस्यमय छ।
स्याउलाइटको रूपमा नि: शुल्क रूपमा हुनेछ र सबै कामको लागि आवश्यक रूपमा सूर्यको रोशनी वृद्धिको लागि आवश्यक छ, तर त्यो चयन गर्न सकिने छैन जुन यसले सूर्यको रोशन भन्दा बढी निर्णय गर्दछ। सूर्य हामी सबैलाई राम्रो र खराब भन्छौं चमक दिन्छ, तर सूर्यले राम्रो वा खराब हुने उद्देश्यले चमक गर्दैन। सूर्यले मोरबत्ती र मृत्यु फैलाउने कोसिस गर्नेछ, र पनि मीठा-सुगन्धित पृथ्वीले आफ्ना छोराछोरीको लागि जीवन दिने खाना उत्पादन गर्न पनि सक्छ। सनस्ट्रोक र मित्रतापूर्ण स्वास्थ्य, अड रेगिस्तान र उपजाऊ घाटी, घातक रातोपहर र स्वस्थ फलहरू, सूर्यका उपहारहरू समान छन्।
विजुली को स्रोत हो कि हत्यारा घातक झटका हड़ताल को सक्षम बनािन्छ, र शक्ति को स्रोत पनि हो जो एक को दया, मानसिक या शारीरिक व्यायाम या स्वयं को बलिदान को कुनै पनि कार्य गर्न सक्षम बनािन्छ। आफैलाई उधारो लगाउँदा यसलाई प्रयोगमा लैजान्छ, आफैंले आफैंलाई निस्क्रिय पार्छ। यो न त क्रियाकलापको न त सीमित छ र यो क्रियाकलापको उद्देश्य हो, तर दुवैलाई आफैंलाई अनुभव गर्दछ जुन अनुभवको माध्यमबाट, र एक्शनको परिणामको रूपमा, अभिनेता सही र गलत कार्यको अन्तिम ज्ञान हुन सक्छ।
यो भन्न गल्ती ठूलो छ कि यो बलियो हुन सक्छ किनभने यो सूर्यलाई प्रकाश दिन सक्छ भन्न भन्न हुनेछ। सूर्य को प्रकाश को रूप मा शक्ति को स्रोत हुनेछ। मानिसले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्दछ जस्तै त्यो सूर्यलाइटको प्रयोग गर्दछ, तर मानिसले जान्दछन् कि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ कसरी बुद्धिमानी देखि पनि कम डिग्री मा उनीहरूले कसरी सूर्यलाइटको प्रयोग गर्ने बारे थाहा पाउछन्। त्यो सबै मानिसले गर्न कसरी तयार गर्न जान्छ, र त्यसपछि सूर्यलाइट वा इच्छाको प्रयोगको लागि उपकरण तयार गर्न। सूर्यलाइटले धेरै मात्रामा बल वितरण गर्दछ जसले मानिसलाई मात्र छोटो भागको प्रयोग गर्दछ, किनकी उसले न त त्यो यसको प्रयोगको लागि उपकरणहरू कसरी तयारी गर्ने भनेर थाहा पाउँदछ, र किनकि त्यो थाहा छैन कि यो कसरी बुद्धिमानी प्रयोग गर्ने। सबै शक्तिको महान स्रोत हो, तर मानिसले यसलाई धेरै सीमित डिग्रीमा प्रयोग गर्दछ किनभने उहाँसँग राम्रो यन्त्रहरू छैनन्, किनकि उसले थाहा पाउदैन कि कसरी प्रयोग गर्ने, न त कसरी यसको प्रयोगको लागि उपकरण तयारी गर्ने।
आफ्नै विमान र गतिको विमानमा, रंगहीन र अप्रत्याशित हुनेछ; मस्तिष्कको विमान र विश्वव्यापी आत्मा (gemini-aquarius) को विमानमा, आत्मालाई रमाईन्छ, र आत्माको रक्षा गर्न, एकता र सबै चीजहरूको लागि बलिदान गर्न को लागि पदार्थ सक्षम गर्न सक्षम बनाउँछ; सासको विमान र व्यक्तिगतता (क्यान्सर-मरिच) को विमानमा, सबै कुराहरू प्रकट गर्न सांसको शक्ति हो, र व्यक्तिगत ज्ञान-अमर र अमरत्व व्यक्तित्व व्यक्त गर्दछ; जीवन र विचार (लियो-थोरै) को विमानमा, यसले जीवनलाई निर्माण गर्न र फारमहरू तोड्न सक्षम बनाउँछ, र उनको छनौटका वस्तुहरू अनुसार इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न सोच्दछ; फारम र इच्छा (विमान-वृश्चिक) को विमानमा, यसले शरीर, रङ, र आकृति बनाएको छ, र यसको अन्धा आवेग अनुसार कार्य गर्न चाहने सामर्थ्य बनाउन सक्षम बनाउँछ; सेक्स (लाइब्रेरी) को विमान मा, यो फोरम, संयोजन, समायोजन, ब्यालेन्स, ट्रांसम्यूट, र मानिस र ब्रह्माण्ड को सबै सिद्धान्तहरु को बहाना गर्न को लागि यो साम्राज्य प्रदान गर्नेछ।
यसैले मानिस आफ्नो शारीरिक शरीरमा कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्न आवश्यक भौतिक र शक्तिहरू, र इच्छाको जादुई कार्यको प्रयोग गरेर सबैलाई, शक्ति, वा भगवान हुन आवश्यक छ।
प्रत्येक मानव एक मात्र मानिस होइन, तर सात पुरुषहरूको संयोजन। यी प्रत्येक पुरुषहरु को आफ्नो जड भौतिक सात को सात घटकहरुमा एक छ। भौतिक मानिस सात को सबै भन्दा कम र सबै भन्दा ठूलो छ। सात पुरुषहरू: सकल शारीरिक व्यक्ति; फारमको मानिस; जीवनको मानिस इच्छाको मानिस; मानसिक मानिस; आत्माको मानिस; इच्छा मानिसको। मानिस मानिसको भौतिक पक्ष भौतिक शरीरमा अर्ध सिद्धान्त हो। यस सिद्धान्त सिद्ध रूपमा नि: शुल्क र प्रयोगका लागि प्रयोग नभएको छ जुन यसलाई राखिएको छ जस्तो कि यसको बुद्धिमान सिद्धान्त हो जुन यसको शक्ति हो।
प्रत्येक इन्थथथिंग (क्यान्सर) मा, सांसले रक्त, इच्छा को लागी इच्छा (वृश्चिक) को माध्यम ले उत्तेजित गर्छ। जब यो केन्द्रलाई प्रोत्साहित गरिन्छ, साधारण व्यक्तिको साथ, सोचाले इच्छा अनुसार प्रेरित गरिएको छ, जुन सामान्यतया सोचेमा नियन्त्रण गर्दछ र सोच्दछ (पिसास), विचारको पछाडि, कार्यको इच्छालाई पराजित गर्दछ। यसैले हामी हेटेटिक यसो भन्छौं: "पछ्याउने इच्छाको पछाडी," जुन तथ्यहीन आधारमा आधारित छ र त्यसमा आधारित छ, र त्यसो भए तापनि कुनै पनि कार्यको परिणाममा नचिन्नु, कार्यको शक्तिको स्रोत हो; र त्यो इच्छाको कार्यलाई उत्प्रेरित गर्न, आफ्नो वर्तमान राज्यमा मानिस चाहियो। यदि, तथापि, विचारले इच्छाको सुझाव पछ्याउँदैन, तर यसको सट्टा एक उच्च आदर्शको लागि आशिष्मा अपील गर्दछ, इच्छाको बल त्यस विचारलाई पछ्याउनुपर्दछ, र यो उठाउनेछ। सांस-इच्छा-इच्छाको त्रासदी (क्यान्सर-वृश्चिक-पिसी), फेफड़ोंबाट हो, सेक्सका अङ्गहरू, टाउकोमा टाँस्नुको कारण हो। राशि राशि ब्रह्माण्ड र कुनै पनि वा सबै सात मान्छे को निर्माण र विकास को योजना हो।
सेमिनार सिद्धान्त शरीरमा माध्यम हो जुन सार्वभौमिक माध्यमले सञ्चालन गर्न सक्दछ, र एक व्यक्तिको सम्भावना र प्राप्यताले यो सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्दछ जुन उपयोगमा निर्भर गर्दछ। शरीरमा अमरता प्राप्त हुन्छ। केवल आफ्नो शरीरमा बाँच्न मात्र, मात्र मृत्यु हुनुअघि, मानिस अमर हुन सक्छ। शरीरको मृत्यु पछि कुनै पनि अमर हुँदैन, तर उसले यस पृथ्वीमा नयाँ मानव शरीरको शरीरमा पुनरुत्थान गर्नु पर्छ।
अब, अमर हुन को लागी, एक व्यक्ति को "जीवन को elixir," "अमरता को पानी," "देवताओं को अमृत", "अमृता को मीठो पानी," "सोसा रस," को पिउन को रूप मा यो भनिन्छ विभिन्न साहित्यहरूमा। उसले, जस्तै कि अलचेस्टहरूले यसलाई राखे, "दार्शनिकको ढुङ्गा" भेट्टाएका छन्, जसमा बास्कर धातुहरू शुद्ध सुनमा प्रवर्तित हुन्छन्। यो सबै एक कुरालाई बुझाउँछ: दिमाग-मानिसलाई, र अर्का सिद्धान्त जसले उसलाई पोषण गर्दछ। यो जादुई एजेन्ट हो जसको द्वारा सबै नतीजा उत्पादन गरिन्छ। सिमाना सिद्धान्त आत्म-चलिरहेको छ, आत्मा-द्रुत बनाउने, मन-बलियो बनाउन, चाहने जलविद्युत, जीवन निर्माण, फारम दिने, शरीरमा उत्प्रेरक शक्ति।
त्यहाँ शरीरमा लिइएको चारवटा खानेकुराहरूको क्विटिनेसनेसको चौथो राउन्डबाट अलाइममाइज गरिएको छ (सम्पादकीय हेर्नुहोस् "खाना," शब्द, भोल्युम म, नं। 6), दिमाग मान्छे। उहाँले पोषित र अर्धीय सिद्धान्त द्वारा बनाइएको छ, जुन हुनेछ। मन-मनु, जो जादू हो निर्माणको यो परिणाम पूरा गर्न, सबै अन्य चीजहरू मौलिक सिद्धान्तमा सहायक हुनु पर्छ; जीवनको सबै कार्यहरू, उत्प्रेरित sublimating को उद्देश्य गर्न; र, यसैले, सिम्यानल सिद्धान्तमा कुनै कल गर्नु हुँदैन जुन यसको अधीनता वा अधिक गर्न को लागी शक्ति प्रदान गर्न को लागी। त्यसपछि सार्वभौमिकले उत्तिकैताले इच्छाको माध्यमबाट बनाउनेछ, त्यो मनको शरीर जसले आत्म-सजग हुन्छ। मृत्यु शरीरको मृत्यु भन्दा पहिले। विद्यार्थीहरूको लागि एक व्यावहारिक विधि शरीरमा माथिल्लो केन्द्रको इन्फ्लुथिंगको बारेमा सोच्नु हो, जब सम्म विचारहरू अवस्थित रूपमा केन्द्रित भएन। जब पनि विचारहरू निम्न केन्द्रहरूमा इच्छामा आकर्षित हुन्छन्, विचारहरू तुरुन्तै उठाइनु पर्छ। यसले दिमाग-म्यानलाई बनाउँछ र माथि बाट इच्छामा सिधै कल गर्दछ, बट्टालाई तलबाट इच्छा द्वारा सारिनेछ। पछ्याउने इच्छा चाहियो, तर माथिको इच्छा खडा हुनेछ। सचेतनाको मार्गमा आचार्य नयाँ नियम बनाउँछ; उनको लागि अर्डर परिवर्तनहरू; उनको लागि: माथिको इच्छा खडा हुनेछ।
सबै वास्तविक प्रगतिको आवश्यकता एक दृढ दृष्टान्त हो जुन हरेक मानव अधिकार र अधिकारको छनौट छ, आफ्नो बुद्धि अनुसार काम गर्न, र उनीहरूको कार्यको मात्र सीमा अज्ञानता छ।
सानो ज्ञान संग र स्पष्ट रूपमा कुनै स्पष्ट धारणा को रूप मा उनि वास्तव मा जान्दछन्, मान्छे मुफ्त इच्छा र भाग्य को बारे मा बोल्छन। कोही भन्छन् कि त्यो मानिस स्वतन्त्र हुनेछ, अरूले भने कि यो इच्छा मुक्त हुनेछैन, त्यो एक संकाय वा दिमागी गुण हुनेछ। धेरैले मान्नुहुन्छ कि दिमाग र अरू सबै भाग्यको काम गर्दैछ; कि सबै चीजहरू किनभने तिनीहरू हुन् किनभने तिनीहरू यति धेरै भाग्य हुन्छन्; कि सबै चीज भविष्यमा मात्र हुनेछ जुन तिनीहरू पूर्वनिर्धारित र योग्य हुन्छन्, एक श्रेष्ठ इच्छा, शक्ति, प्रवीणता, भाग्य, वा ईश्वरले बन्यो; र त्यो, यस मा कुनै आवाज वा छनौट छैन, मानिसले पेश गर्नु पर्छ।
स्वतन्त्रता कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सकिंदैन जसले intuitively कि महसुस हुनेछ मुक्त गर्दैन। उनीहरूले विश्वास गर्छन् कि सबै आफ्नो भन्दा अर्को पूर्वनिर्धारित इच्छा द्वारा कार्य गर्न असक्षम छन्, नियन्त्रित छ र प्राकृतिक आवेग द्वारा नियन्त्रित छ जो इच्छाहरु जो enfolds र उसलाई bondage मा राखन को माध्यम ले नियंत्रित। जबकि एक व्यक्ति मानिन्छ कि उनको छनौट वा "मुक्त इच्छा" को शक्ति छैन, इच्छा र नियंत्रण को वर्चस्व को तहत आदत को आफ्नो तत्काल ट्रेडमिल उनको कदम को कुनै संभावना छैन।
यदि यो सत्य हो भने नि: शुल्क हुनेछ; त्यो मानिसले गर्न सक्छ; कि सबै मानिसहरूसँग अधिकार र छनौट शक्ति हो; हामी कसरी बयान मिलाउछौं? प्रश्न हिसाबले, कुन मानिसमा हो? के हुनेछ र कुन भाग्य हो। कुन मान्छे र के हुनेछ, हामीले देखेका छौं। अब, के भाग्य के हो?
गति जुन कुनै न्युमनलम अपमानजनक संसारमा समृद्ध पदार्थबाट प्रथम विभेदको कारणले गर्दा कुनै पनि विकासवादी अवधिमा प्रकट भएको छ, संयुक्त इच्छा र विचार, ज्ञान र ज्ञान र अघिल्लो विकासवादी अवधिको आधारमा निर्धारण गरिन्छ, र यो गति पूर्ण छ। र अपरिवर्तनीय यस कार्यमा लगभग जुन त्यही डिग्री वा विकासको चरण अघिल्लो विकास प्रक्रियाको अवधिमा पुगेको छ। यो भाग्य वा भाग्य हो। यो हाम्रो खाताको सन्तुलन पत्र र विकासको अघिल्लो चक्रको खाता हो। यो ब्रह्मांड वा मानिसको जन्मको लागि लागू हुन्छ।
समय र जन्मको स्थान; वातावरणको परिस्थिति; प्रजनन, र शरीर को निहित संकायहरु र प्रवृत्तियों; भाग्य हो, रेकर्ड वा चरित्रको खाता, जुन क्यारेक्टरको विरासत यसको विगतका प्रयास र अनुभवबाट हो। कुल अनुकूल वा अनुचित हुन सक्छ। यसमा सुरू गर्न एक ब्यालेन्स पाना छ र पुरानो खाताहरूको लागि बसोबास गर्नु पर्छ। शरीर को प्रवृत्तियों र संकायहरु भाग्य हो जब सम्म कि खाते मा बसे सम्म उनि मन को कार्य को सीमित गर्छन। त्यसपछि, त्यहाँ कुनै भाग्य छैन, कुनै छनौट छैन? त्यहाँ छ। छनौट यस तरिकामा निहित छ जसमा उसले आफ्नो भाग्य स्वीकार गर्दछ र प्रयोग गर्दछ।
मानिस पूर्णतया त्याग्न सक्छ र आफैंको विरासतको सुझावलाई त्याग्न सक्छ, वा उनीहरूले उनीहरूको लायकको लागि सुझावको रूपमा स्वीकार्न सक्छन् र तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्ने तयारी गर्न सक्छन्। पहिलेको सानो प्रगति देख्न सकिन्छ, तर त्यो आफ्नो भविष्य को आकार को रूप मा शुरू गर्न को रूप मा त्यो वर्तमान आकार को आकार मा शुरू हुनेछ।
छनौटको क्षण सोचको हरेक पल हो। भविष्यको जीवनका विचारहरूको कुल भविष्य भविष्य अवतारको भाग्य वा सम्पदा हो।
मानिस स्वतन्त्र रूपमा हुनेछ वा प्रयोग गर्न सक्दैन जुन आफै आफैले मुक्त छैन, र कुनै पनि स्वतन्त्र छैन जुन आफ्ना कार्यहरू वा तिनका कार्यहरूको परिणामसँग संलग्न छ। मानिस केवल डिग्री को लागी निःशुल्क छ कि उसले आफ्नो कार्यहरु को बिना अनुलग्नक कार्य गर्दछ। एक स्वतन्त्र व्यक्ति हो जुन सधैं कारण संग कार्य गर्दछ, तर न त उनीहरूको कार्यसँग संलग्न छैन र न कुनै कार्यका परिणामहरू।
यो, आफैले, निर्णय गर्दछ र चयन गर्दछ जब चेतना हुन सक्छ, तर कहिलेकाहीँ कुनै पनि परिस्थिति वा अवस्था अन्तर्गत चासो हुनेछ वा छनौट गर्न वा निर्णय गर्नेछ, यो के गर्नेछ, यद्यपि यो शक्ति को एक मात्र स्रोत हो जुन सबै अधिकार कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्दछ र कार्यहरूको प्रभावहरूको बारेमा ल्याउँछ।
संपादकीय मा फारम (शब्द, भोल्युम म, नं। 12) यो भनिएको छ कि त्यहाँ मात्र दुई मार्गहरू छन्: चेतनाको मार्ग र फारमहरूको बाटो। यसलाई अहिले थपिनु पर्छ: इच्छाहरू फारमहरूको बाटो हो; चेतनाको बाटो हुनेछ।
के सबै इच्छाको इच्छावान निर्माता प्रिरभर र पुनः रचनाकार हुनेछ। यो सबै अनौठो समय सबै अनन्त शक्तिको समयको अनन्त स्रोतको अनन्त स्रोत हो। हरेक विकास वा अभिव्यक्तिको महान अवधिको नजिकमा, सार्वभौमिक गतिमा सम्पुर्ण सम्पदा हुनेछ जुन सबै भन्दा महत्वपूर्ण पदार्थमा सबै समस्याहरू समाधान गर्दछ, प्रत्येक कणलाई इशारामा यसको कार्यका रेकर्डहरू प्रभावित गर्दछ; र पदार्थले यी छापहरू राख्छ तापनि जमे भएका पृथ्वीले विगतका रोगाणुहरू सुरक्षित गर्दछ। यो पनि, प्रत्येक महान अभिव्यक्तिको सुरुमा, आत्म-गतिको रूपमा, पदार्थमा पहिलो गति र जीवन र क्रियाकलापमा वसन्तको सबै रोगाणुहरूको कारण हुन्छ।
सबै अनगिनत अनन्तताहरूको माध्यमबाट ठूलो बलिदान हुनेछ। यो आफैलाई पहिचान गर्न र निर्वाह गर्न को लागि शक्ति छ, तर यो अनन्तताहरु को माध्यम ले रहन को लागि माथि सीढी माथि रहन्छ जो मामला को हरेक कण अनुभव अनुभव र ज्ञान र ज्ञान र शक्ति को सबै चरणहरु मार्फत जान सक्छ र अन्तमा, स्वयं इच्छुक, शोक हुनु।